ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး တက်ကြွစွာချဉ်းကပ်မှုက တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အိုမီခရွန် တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ Dongcheng ခရိုင်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါစမ်းသပ်နေရာတွင် nucleic acid စစ်ဆေးမှုအတွက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသော ဒေသခံများအား ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး (zero-COVID) တက်ကြွစွာချဉ်းကပ်မှုက တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ကူးစက်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိးတိုးတက်မှုကြား သိသာထင်ရှားသော ဟန်ချက်ညီမှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း တရုတ် ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက ပိုမိုကူးစက်မြန် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်များ ဧပြီ ၂၉ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတစ်ဝန်း လက်ရှိ ကူးစက်ရောဂါလှိုင်းက မတည်ငြိမ်ဖြစ်နေသည့်ကြားမှ အားလျော့လာပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု အမျိုးသား ကျန်းမာရေးကော်မရှင် (NHC) ဒုတိယအကြီးအကဲ Li Bin က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်တလော၌ ကျိလင် အပါအဝင် ယင်းဒေသများရှိ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် ရောဂါကူးစက်မှုများမှာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ရပ်ရွာအဆင့် အခြေပြုမှုများ ရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်မှုမှာ ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း NHC အရ သိရသည်။
ပိုမိုကူးစက်မြန်သော အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းများ ဖြေလျှော့ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ကြောင်း တရုတ် ထိပ်တန်းရောဂါပိုးမွှားဗေဒပညာရှင် Liang Wannian က ဧပြီ ၂၉ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ငယ်ရွယ်သူများမှာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံမှု ခံယူနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသအသီးသီးမှာလည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ၌ ကွာဟချက်များ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း NHC အောက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ (COVID-19) တုံ့ပြန်ရေးကဏ္ဍ အကြီးအကဲ Liang က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၈ ရက်အထိ အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက် ပြည်သူ ၂၁၅ သန်းကျော် သို့မဟုတ် ယင်းအသက်အရွယ်အုပ်စု၏ ၈၁.၄၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်ပြည်မကြီးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း NHC ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။
“ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာ လွန်စွာပါးလျားနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်တွေကို ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးချဉ်းကပ်ရာမှာ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ရေးကို ကျင့်သုံးရမှာပါ” ဟု Liang က ဆိုသည်။
ပေကျင်းမြို့နှင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအား အသိအမှတ်ပြုပြောကြားလျက် လျင်မြန် ပြည့်ဝသော ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါကူးစက်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း Liang က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး ချဉ်းကပ်မှုက နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရောဂါကူးစက်မှုများအားလုံး လျော့ပါးရန်ကိုသာ ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကူစက်ရောဂါတန်ပြန်လုပ်ငန်းတွင် များပြားလှသော အတွေ့အကြုံများ စုဆောင်းမိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်မှုများအဖြစ် ချဉ်းကပ်မှုမှာ ထပ်မံချိန်ညှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း Li Bin က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၉ ရက်က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုက အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ရာ ယင်းအစည်းအဝေး၌ ပြည်သူများ၏ အသက်ရှင်သန်မှုများနှင့် ကျန်းမာရေးအား ကာကွယ်ရန်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် ကူးစက်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှု လျှော့ချရန် ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး တက်ကြွစွာ ချဉ်းကပ်မှုကို စောင့်ထိန်းရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးချဉ်းကပ်မှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်သူများ၏ အသက်ရှင်သန်မှုများနှင့် သုခချမ်းသာကို ထိန်းသိမ်းရန် ကိုင်တွယ်စီမံလျက်ရှိကြောင်းနှင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် ကူးစက်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကို ကြီးမားစွာ လျှော့ချပေးလျက်ရှိကြောင်း Li Bin က ဧပြီ ၂၉ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောခဲ့သည်။
အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ပိတ်ဆို့ထားသော စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ ဒေသများရှိ စိုးရိမ်ရသော လူနာများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များနှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များအား မှန်ကန်သောဆေးကုသမှုများ ပေးခြင်းနှင့် ကျန်း မာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ အပါအဝင် ကိုဗစ်ရောဂါဒဏ်ခံစားခဲ့ရသော ဒေသခံအချို့၏ အခက်အခဲများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအတွက် ရှင်းလင်းသောလိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုထားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် nucleic acid စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ အဖြေမသိရသေးချိန်တွင် အပြင်းအထန်ဖျားနာမှုအတွက် အရေးပေါ်အခန်းများ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခန်းများရှိ ကြားခံဇုန်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသုံးပြုသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး တက်ကြွသောမူဝါဒသည် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ကြန့်ကြာစေသည်ဟူသော ပြောဆိုချက်အပေါ် Liang Wannian က ဧပြီ ၂၉ ရက်၌ ချေပပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေး တက်ကြွစွာချဉ်းကပ်မှုသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဟူသည်မှ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏ မှန်ကန်သော အကြောင်းရင်းမဟုတ်ကြောင်း Liang က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
China Focus: Dynamic zero-COVID approach best option for China in fighting Omicron
BEIJING, April 29 (Xinhua) — The dynamic zero-COVID approach remains the best option for China in strikingabalance between epidemic response and economic development, Chinese health officials said Friday.
“Nationwide, the current wave of epidemic is diminishing amid fluctuations,” said Li Bin, deputy head of the National Health Commission (NHC), atapress conference.
At present, cluster infections in regions including Jilin have been contained, and the work to clear community-level infections in Shanghai is progressing well, according to the NHC.
In the face of outbreaks caused by the more infectious Omicron variants,arelaxation of epidemic control and prevention is not an option for China, top Chinese epidemiologist Liang Wannian told Friday’s press conference.
The country is yet to get its elderly and underage population fully vaccinated. In the meantime, different parts of the country face discrepancies in medical resources, Liang, head of the COVID-19 response expert panel under the NHC, noted.
By Thursday, over 215 million people aged 60 and above, or 81.49 percent of the age group, have been fully vaccinated against COVID-19 on the Chinese mainland, NHC figures show.
“Under such circumstances, the country’s medical resources will be stretched too thin should we adoptalaissez-faire epidemic containment approach,” said Liang.
Regarding anti-epidemic work in Beijing and Shanghai, Liang said that swift and full implementation of containment policies is needed to effectively contain infections caused by the Omicron variants and stay one step ahead of the virus.
Li Bin reiterated that the dynamic zero-COVID approach does not aim to eliminate all infections nationwide, adding that the country has accumulated considerable experience in its counter-epidemic work, and will further fine-tune its approach as the situation evolves.
Also on Friday, the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee convenedameeting, during which the Chinese leadership called for upholding the dynamic zero-COVID approach to protect people’s lives and health, and to minimize the impact of the epidemic on economic and social development.
By pursuing its dynamic zero-COVID approach, China has managed to safeguard people’s lives and well-being, and has minimized the epidemic’s impact on economic and social development to the largest extent, Li Bin told Friday’s press conference.
Li listed clear requirements to address the difficulties of some COVID-affected residents in seeking medical services, including coordinating epidemic prevention and control with medical services within medical institutions and ensuring the treatment of acute and critical patients, pregnant women and newborns in areas under closed-off management.
For the critically ill, the buffer zones in emergency rooms or operating rooms should be put into use inatimely manner when their nucleic acid test results are yet unknown, he said.
Liang Wannian on Friday rebutted the claim that China’s dynamic zero-COVID policy has impeded the country’s economic growth, saying the approach does not run counter to economic development and normal production and life.
The dynamic zero-COVID approach coordinates measures against the epidemic with economic development, Liang said, noting that the virus is the true cause of the economic downturn. ■
Photo : Residents queue up for nucleic acid testing ataCOVID-19 test site in Dongcheng District of Beijing, April 28, 2022. (Xinhua/Zhang Chenlin)